Mitantara Ny Fanentanana Manerantany Tamin’ny Fanampiana An’Itompokolahy Boukary Konaté Tamin’ny Aretiny I Phil Paoletta Ao Bamako · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2017 5:47 GMT
Tao Bamako, nanao antso ho fanohanana ara-bola mba hanangonana ny 8.500$ izay hanatontosana ny fitsaboana an'i Boukary Konaté i Phil Paoletta, teratany Amerikanina iray monina any Mali. Nahangona vola maherin'ny 9 600 dolara amerikana izy tao anatin'ny tapa-bolana, izay ampy tsara hanaovana saran-dalana Bamako-Tunis-Bamako ho an'ilay marary miaraka amin'ny dokotera iray hiaraka aminy, ho fandaniana sy ny fikarakarana ara-pitsaboana.
Indrisy anefa, rehefa tonga tany Tunis ny dokotera, dia nahita fa efa tena natahahorana ny toe-pahasalamany ka tsy azo notanterahina ny fandidiana azy. Nalefa niverina tany Bamako i Boukary tamin'ny sidina voalohany ary maty izy andro vitsivitsy taty aoriana.
Ato anatin'ity antsafa ity, manazava ny fomba nahavitany nanangona ny vola betsaka tao anatin'ny tapa-bolana i Phil Paoletta sy ny lafiny hafa tamin'ilay voina izay nahafaty an'i Boukary.
Afaka mampahafantatra anay ny momba anao ve ianao sy ny antony mahatonga anao Amerikana eto Mali?
Nanomboka tamin'ny taona 2010 aho no teto Mali. Tamin'ny voalohany, tonga teto aho satria liana tamin'ny mozika Maliana. Ary avy eo aho dia nanomboka liana tamin'ny lafiny hafa toy ny ara-kolontsaina ihany koa, toy ny fiteny bamanankan [Bambara], ary tamin'izany no nahitako an'i Boukary.
Hazavao ny fandraisanao anjara tamin'ny fanohanana ara-pitsaboana an'i Boukary:
Manenina aho fa tara loatra vao nahafantatra hoe narary i Boukary. Nisy namako iray niantso ahy mba hampahafantatra ahy momba izany. Rehefa tonga aho nijery an'i Boukary dia hitako fa tena nifamahofaho ny zava-nisy. Nisy dokotera maromaro tafiditra tao anatin'izany sy fitiliana maro. Nahatsiaro ho voatery nanazava ny zava-nisy araka izay azoko natao aho. Niantso ahy i Claire Ulrich avy ao amin'ny Global Voices ary nanoro ahy dokotera iray hafa tao Bamako ary tamin'izay no nikasana ny hitondrana azy hotsaboina any ivelany .
Raha ny famantarana ny aretina nahazo an'i Boukary, inona no zava-nitranga? Nisy ve ny hadisoana tamin'ny fanaraha-maso ara-pitsaboana natao taminy ?
Eny, indrisy fa betsaka ny fotoana very tamin'izany. Diso hatramin'ny voalohany ny fitiliana natao taminy. Nolazaina fa hoe ‘ulcère’ izany kanefa tena aretina mbola mampahatahotra kokoa ilay izy. Ankoatra izany, tsy nitovy hevitra ny olona tsirairay. Nisy dokotera maro izay nanome fanazavana mifanohitra avokoa. Tena nampalahelo ny dingan'ny fitsaboana natao.
Ahoana no tsy nahitana fa tena natahorana ny toe-pahasalamany raha tsy taorian'ny nandefasana azy tany Tunis?
Nalefa haingana tany ivelany avy hatrany izy raha vao fantatra fa nisy fanantenana tamin'ny fandidiana azy . Natao ny fitilina lalina izay nahitana fa efa tara loatra ny handidiana azy tao Tunis.
Nahavita nanangona vola maherin'ny 9.000 dolara Amerikana antserasera ianao tao anatin'ny tapa-bolana, tao Bamako, noho ny tambajotra sosialy. Azonao hazavaina ve ny fomba sy ny anton'ny fahombiazana toy izany tao anatin'ny roa herinandro latsaka?
Ny fahombiazan'ny fanangonam-bola dia satria nahazo olona maro nandritra ny taona maro i Boukary. Olona maro no nahita ny fiteny sy ny kolontsain'i Mali noho izy. Izany no nahafahantsika nahita ny fomba haingana hitsaboana azy any ivelany.
Ahoana ny momba ireo tetikasa rehetra izay natao sy tao anatin'ny fandaharam-potoanan'i Boukary ? Manana hevitra ve ianao?
Eny, efa niresaka momba izany niaraka tamin'i Renaud Gaudin, Frantsay “wikipédien” sady manam-pahaizana momba ny solosaina mipetraka ao Bamako, aho. Nifandray tamin'ny tanora iray izay efa niara-niasa nanampy an'i Boukary izy. Mbola eo am-pandinihana ny fomba ahafahana manohy ny asany izahay. Miandry ny fianakaviana ho tafaverina avy any an-tanànakely izahay.
Inona no lesona azonao tsoahina avy amin'io voina io?
Misy ny lesona maromaro azo notsoahana tao anatin'ity voina ity, saingy ny tena lehibe indrindra dia ny hoe tena voafetra ny fahafahana mitsabo-tena ao Mali. Dokotera iray no tena nahatonga ny fahafatesan'i Boukary satria tsy nilaza akory ny fahafahany mitsabo tena any ivelany izy. Ankoatra izany, reko fa tsy nisy mihitsy ny fisorohana ny hepatita B tao Mali. Atao vakisiny ny ankizy kanefa tsy atao ny olon-dehibe, maro ny olona no tsy mahalala. Mbola tanora loatra i Boukary ary tena mampalahelo satria mieritreritra aho fa azo natao ny nisoroka izany.